Bartilmaameedka Kooxaha Liverpool & Chelsea Ee Christian Pulisic Oo Shaaciyay Waqtiga Uu Go'aan Ka Gaadhayo Mustaqbalkiisa Dortmund. - Gool24.Net
Bartilmaameedka Kooxaha Liverpool & Chelsea Ee Christian Pulisic Oo Shaaciyay Waqtiga Uu Go’aan Ka Gaadhayo Mustaqbalkiisa Dortmund.
Kooxaha Liverpool iyo Chelsea ayaa wali ah kooxaha ku dagaalamaya saxiixa xidiga kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka Maraykanka ee Christian Pulisic laakiin kooxaha reer England ayaa helay war muhiim ah kadib markii uu Pulisic sheegay waqtiga uu go’aan ka gaadhayo mustaqbalkiisa.
Christian Pulisic ayaa ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican kooxda Borussia Dormund oo xili ciyaareedkan soo bandhigaysa qaab ciyaareedkeedii ugu fiicnaa sanadihii ugu danbeeyay iyada oo waliba dhibco badan ku qabtay hogaanka Bunesliga isla markaana qarka u saaran in ay u soo baxdo wareega 16ka kooxood ee UEFA Champions League ku tartami doona.
Christian Pulisic ayaa shaaciyay in waqtiga qaboobaya ee bisha January uu go’aan ka gaadhi doono mustaqbalkiisa isaga oo wada xaajood la yeelan doona maamulka kooxdiisa Dortmund, waana arin aad muhiim ugu ah kooxaha Chelsea iyo Liverpool oo xidigan ku dagaalamaya.
Christian Pulisic ayaa isaga oo arintan ka hadlaya yidhi: “Anigu wali waxaan diirada saarayaa Dormund, xili ciyaareedkan wax fiican ayaanu samaynaynaa. Marka uu yimaado fasaxu (January), taas ayaa ah marka aan sida caadada ah la xaajoon doono Dortmund ee aan arki doono mustaqbalkayaga”.
Chelsea ayaa doonaysa in ay Liverpool ka dulqaado saxiixa Christian Pulisic iyada oo ka walwalsan in ganaax laga saaro suuqa kala iibsiga maadaama oo uu kooxdeeda ku socdo baadhitaan ah in ay jabisay sharciga dhaqaale wanaaga ee ciyaartoyda da’yarta ah.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa doonaya in kooxdiisii hore ee Dortmund uu kala soo saxiixdo Christian Pulisic kaas oo waqti dheer lala xidhiidhinayay in uu Anfield kula biirayo Klopp.
Laakiin marka uu furmo suuqa bisha January ayaa ah waqtiga uu Christian Pulisic u cayimay in uu maamulka kooxdiisa kala hadli doono mustaqbalkiisa waxayna ku soo beegmaysaa waqti la filayo in kooxaha Premier league ee Chelsea iyo Liverpool ay xaaladiisa si wayn ula socon doonaan.
Si kastaba ha ahaatee, Borussia Dortmund oo hami wayn leh xili ciyaareedkan ayaan la filayn in ay si sahlan ku fasixi karto Christian Pulisic iyada oo haddii kale dalban doonta lacag aad qaali u ah.